Mpivady niara-maty - Nifanelanelana ora folo ny nandaozin'izy mivady ny tany - L'Hebdo de Madagascar
Niara-namonjy alim-pandihizana ana famadihana, Razafimandimby Robert sy Rasoambolanoro Augustine mivady, ny zoma hifoha ny sabotsy 5 oktobra, monina etsy Ankazomanga Atsimo. Be loatra ny zava-pisotro nisy alikaola nosotroin-dramatoa ka tsy nahafoha maraina ny ampitso. Nilaozan-drangahy namonjy ilay famadihana ramatoa.
Nitrona be Augustine no nanaitra ireo mpiara-monina taminy ary nandao ny tany tsy ela. Nampandrenesin’ny anabaviny i Robert fa maty ny vadiny tany ampamonjena famadihana. Nanome tsiny an’i Robert ny fianakaviam-badiny noho ny tsy fandraisany andraikitra fa namelany irery ny vadiny tao an-trano. Nanapa-kevitra nisotro fanafody famonoana biby kely no làlana nosafidian’i Robert noho ny famoizam-po nilaozam-bady sy ny fanomezan-tsinin’ireo fianakaviam-badiny.
Valo taona no faharetan’ny fanambadian-dRazafimandimby Robert sy Rasoambolanoro Augustine, nonina tetsy Ankazomanga Atsimo izao izy niara-maty izao. Folo ora taorian’ny nahafatesan’i Augustine, vokatry ny fisotroana toaka tafahoatra dia nandao ny tany ihany koa i Robert, vadiny, tamin’ny fisotroana fanafody famonoana biby kely noho ny famoizam-po. Mateti-piseho ny fifamaliana eo amin’izy mivady noho ny fitenenan’i Robert tsy hamela ny vadiny hisotro toaka. Manao varo-mandeha mivarotra boky no foto-piveloman’izy mivady. Misy fotoana miara-mamo izy mivady no miditra ny trano.
Mivena eran’ny trano ramatoa sady mikarakara sakafo hariva. « Mikiakiaka miantso vonjeo na tsy misy fikasihan-tànana foana ramatoa isaky mananatra azy ny anadahiko tsy hisotro toaka. Lasa fahazarana ho anay ny mahita azy matory maraina rehefa mamo ny hariva. Nisy fotoana efa very ny vary andrahoina eo ambony fatana fa voadonany noho ny hamamoany », hoy Razafindrabodo Voaimbola, anabavin’i Robert, mitantara ny fizotran’ny fiainan’izy mivady, nandritra nivadian’izy mivady, mba hialana amin’ny fanakianana sy fanomezan-tsiny nahazo ny fianakavian’i Robert.
Tao anatin’ny roa volana, niova ny fiainan’izy mivady. Lasa nifankatia tsy nisy romoromo tao an-tokantrano. Samy niezaka nitady vola fa hamadi-drazana ny fianakavian-dRasoambolanoro Augustine, ny zoma 4 oktobra 2019. « Gaga daholo izahay niara-nonina taminy nahita ny fiovana teo amin’izy mivady. Tsy mamo intsony no niditra ny trano rehefa hariva ny andro. Lasa nifankatia sy niresaka tsara », hoy hatrany Razafimandimby Ferdinand, zandrin’i Robert, naneho ny fahagagany tamin’ny fiovana vetivety teo amin’izy mivady.
Nody antoandro tsy toy ny fanaony isan’andro, izy mivady, ny zoma 27 septambra, tokony tamin’ny roa ora tolakandro. Nandamina ny fandaharam-potoana hamonjy alim-pandihizana amin’ilay famadihana avy amin’ny fianakavian’i Augustine izy mivady. Niara-nody izy mivady rehefa alindalina izay samy efa mamo.
Nifoha maraina Razafimandimby Robert nanararaotra nandoko ny entana ho hamidy ny alatsinainy. Niova hevitra indray i Augustine fa tsy hamonjy io famadihana io. Nimenomenona izy fa maty izany anadahiny mipetraka eny Manjakaray sady tsy mbola nisava ny toaka nosotroina ny alina. « Tsy nazava taminay io fahafatesana lazainy fa anadahiny io. Niverina natory izy », hoy Razafindrabodo Voaimbola, mamerina ny fitrangan’ny loza.
Nanapa-kevitra Razafimandimby Robert fa handeha irery hamonjy ilay famadihana. Nomen’i Robert vola ny anabaviny hividianana siramamy hatao dité hosotroin’i Augustine rehefa mifoha. Tokony tamin’ny 10 ora sy sasany, niesona be tao anatin’ny fotoana fohy, Rasoambolanoro Augustine. « Ny zanany vavy niditra ny trano lay natoriany no nanaitra anay nilaza fa tsy nihetsika intsony ny reniny. Nivoaka faroratra ny vavany sady namofona maimbo », hoy Razafindrabodo Voaimbola, mitantara ny nahatapitra ny ain’i Augustine.
Nampandrenesina ny vaomiera miandraikitra ny faritra ny amin’ny fahafatesana. Nantsoina an-tariby ny vadiny tany ampamonjena famadihana. « Nahazo fandrahonana ny anadahiko hoe : aina solon’ny aina. Tsy tokony namonjy ilay famadihana fa tokony namadibadika ny vadiny mamo. Mety nisy mihitsy angamba ny fikasian-tànana tany fa izahay tsy nahita. Ny nataon’ny anadahiko izany no nahafaty ny vadiny », hoy hatrany i Voaimbola, miahiahy ny mety nahatonga ny anadahiny ho namono tena.
Nitomany eran’ny làlana Razafimandimby Robert raha ny fitantaran’ireo niara-dia taminy. Nanala ny fony nitomany ny lehilahy rehefa tonga tao an-trano. Nikasa hamonjy trano fisotroana toaka izy. Nosakan’i Razafimandimby Ferdinand, zandriny faralahy izy. Nanomboka nirediredy eran’ny trano. « Tezao tsara ireo zanako ireo ranabavy. Inty leitsy ny vola omeko an’ialahy farany mantsy ny zanany faralahy. Mbetika miteny hoe alaivo hanaraka anao aho », hoy Razafindrabodo Voaimbola.
Samy nankahery an’i Razafimandimby Robert ny fianakaviany. Tsy misy mahavita mikarakara ireo zanany ireo afatsy izy rainy ihany. Nilany ady izay manakantsakana ny fikasany hamono tena. Tsy nisy nahatsikaritra ny fandehanan’i Robert nivoaka ny trano. « Izy nanary ilay tavoahangy kely nisy fanafody famonoana biby kely vao nisy nahita. Tsemboka be sady sempotra izy. Nifamonjena nentina teny amin’ny hôpitaly », hoy hatrany Voaimbola.
Nanao ny fialana nenina rehetra ny mpitsabo. Tsy misy hatahorana intsony ny aminy fa miandry azy hahatsiaro tena sisa raha ny filazan’ny mpitsabo. « Tsakoahana indray mandeha dia tsy nandeha intsony ny oksizena natao taminy. Tsy tana ny ainy noho ny fijanon’ny fo tampoka. Ny aretina mikiky toy ny aretim-bavony. Ny tsy fahampian’ny kalsioma sy ny tahan’ny siramamy fa tsy ny poizina nosotroiny no nitarika ny fahafatesana raha ny filazan’ny mpitsabo », hoy hatrany ny anabaviny.
Lasa eritreritra ny fianakaviana vao nitranga ny fahafatesan’izy mivady. Misy loza mitranga matetika eo anivon’ny fianakaviana isaky ny fahavalo amby roapolon’ny volana.
Alatsinainy 28 janoary 2019, nodidiana kambo tenda ny zanaka lahin’i Razafindrabodo Voaimbola. Nivoaka fotsifotsy ny masony sady sempotra. Somary nanahirana ny mpitsabo ny fandidiana.
Alakamisy 28 martsa 2019 tamin’ny dimy ora hariva. Nirehitra ny tanàna misy ny trano fonenan-dRazafindrabodo Voaimbola, mianakavy. Tsy nisy ny aina nafoy fa tsy mbola tafarina ny fahavoazana. Mbola mipetraka amin’ny trano lay ny fianakaviana vitsivitsy hatreto.
Sabotsy 28 septambra 2019, niara-maty Razafimandimby Robert sy Rasoambolanoro Augustine mivady.
Ankehitriny, tsy fantatra intsony ny toerana nitondran’ny fianakavian-dRasoambolanoro Augustine azy mianadahy zanak’izy mivady. « Tsy misy fifampidinihana teo amin’ny fianakaviana roa tonta fa nentiny any izy mianadahy. Tsy fantatray na aiza na aiza no hipetrahany kanefa mampalahelo ihany raha teto aminay no nahalehibe sy nahatamana ireny zaza ireny », hoy hatrany Voaimbola, mitantara ny alehelony.